थाहा खबर: हामीलाई आन्दोलन गर्नै जिताइएको हो, अबको लडाइँ सरकार-सरकारका बीच हुन्छ : महतो
हामीलाई आन्दोलन गर्नै जिताइएको हो, अबको लडाइँ सरकार-सरकारका बीच हुन्छ : महतो
हरूवा चरूवाको आन्दोलन भन्नेलाई मधेशमा धुलो चटाइयो
काठमाडौं : दशकदेखि मधेशी जनताको अधिकारको नाममा विभिन्न दलको नेतृत्वमा आन्दोलन चर्किरहँदा सँधैजसो चर्चामा रहने नेता हुन्, राजेन्द्र महतो। नेपाल सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिक उचाईमा उक्लिएका महतो राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्ष मण्डदलका सदस्य छन्। संविधान संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएको राजपाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा पाएको मत परिणाम र आगामी दिनमा राजपाले खेल्ने भूमिकाका सन्दर्भमा महतोसँग थाहाखबरका लागि लिलाराज खनाल र भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी :
आन्दोलनकै क्रममा पार्टी एकता गरी चुनावमा भाग लिनु भयो, चुनावको परिणामलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? मधेश आन्दोलन कहाँ पुग्यो?
यो निर्वाचन मधेश आन्दोलनकै परिणाम हो। यो निर्वाचनलाई पनि हामीले आन्दाेलनकै रुपमा लिएका छौँ। प्रदेश दुई र अन्य जिल्लाहरू जहाँ जहाँ आन्दोलन भयो, त्यहाँ जनताको समर्थन हामीमा देखियो। हाम्रो आन्दोलन जारी नै छ।
यो चुनावको मत परिणामबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
जनताको जुन म्याण्डेड छ, त्यसबाट सन्तुष्टी नै लिनु पर्छ। चुनावबाट पूर्ण सन्तुष्ट त कुन दल हुनुसक्छ र? तर, जनताको म्याण्डेडलाई सम्मान गरेका छौँ। सम्पूर्ण क्षेत्रमा आशातित सफलता मिलेन तर, प्रदेश दुईको सबै र सातको कैलालीबाट हाम्रो पक्षमा सन्तोषजनक नै परिणाम आयो। कैलालीको टिकापुर घटनालाई लिएर हाम्रा नेता रेशम चौधरीलगायतका साथिहरूलाई राज्यले जुन आरोप लगाएको थियो, त्यसको जनताले राम्रै जवाफ दिए।
पाँच नम्बर प्रदेशमा चाहिँ राजपा कमजोर भएको हो?
पाँच नम्बर प्रदेशमा नेताहरू नै पार्टी छोडेर एमालेसहित अन्य पार्टीमा गएका कारणले गर्दा त्यसको असर चुनावमा देखिएको हो। त्यसको असर केही न केही परेको थियो।
हृदयेस त्रिपाठी लगायतले राजपा छोड्नुको कारण तपाई नै हो भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ नि?
त्यो गलत हो। नीति, सिद्धान्त र आदर्शप्रति निष्ठा नभएका, आफ्नो पदीय लालसा बढी भएका, कुन पार्टीमा गएर कसरी चुनाव जितिन्छ भन्ने मनसाय बोकेका साथिहरूले पार्टी परिवर्तन गरेका छन्। आन्दोलनविरोधी पार्टीसँग (एमालेप्रति लक्षित गर्दै) गएका छन्। त्यसैले कुनै व्यक्तिको कारणले होइन कि कुनै पनि माध्यमबाट पद प्राप्ती गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय राखेर राजपा परित्याग गरेका हुन्।
राजपा परित्याग गरी सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा होमिएका हृदयेस त्रिपाठीले मधेशकै मुद्धा अघि सारेर चुनाव जितेका होइनन् र?
एमालेले मधेशको मुद्धा त कहिल्यै पनि उठाएन तर, हृदयेसले उठाए भने पनि मधेशको मुद्धा छोडेर उहाँ एमालेमा जानु भएको हो। जुन मुद्धाको आधारमा व्यक्तित्वको विकास भयो, देश र दुनियाँमा परिचय र पहिचान भयो र जुन मुद्धाको आधारमा जनताबाट मान र सम्मान पाइयो, त्यसलाई छोडेर जुनसुकै आधारमा पद प्राप्त गर्ने उदेश्यले उहाँहरू पार्टी र मुद्धालाई छोडेर मधेशकाविरुद्ध लागेको पार्टीमा जानु राम्रो मानिदैन।
उहाँहरूको बुझाई पनि गलत थियो किनकी राजपामा बस्नेलाई पनि जनताले चुनाव जिताई दिए। यही पार्टीमा बसेर भए पनि चुनाव जित्न सकिन्थ्यो, हिम्मत गर्नु पर्दथ्यो। जुन जनताले पटक पटक जिताएर पठायो, तिनै जनतालाई भरोसा गरेर राजपामै बसेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यसवाट हाम्रो मुद्धालाई कमजोर बनाउने काम भयो।
पार्टी एकता भएको एक बर्ष वित्न लाग्यो, सँगठनात्मक संरचना कमजोर हुँदै गएकोछ । सँगठनलाई मजवुद र पूर्णता दिन नेतृत्व कसरी अघि बढ्छ?
पार्टीबाट एक/दुई जना अलग हुँदैमा पार्टीको सँगठन कमजोर हुने हुँदैन। व्यक्तिले पार्टी छोड्दैमा न मुद्धा नै खतम हुन्छ, न त सँगठन नै खतम हुन्छ। पूर्व झापादेखि पश्‍चिम कञ्‍चनपुरसम्म सँगठनलाई मजबुद बनाउन हामी जुट्नु परेको छ, त्यसमै लाग्दैछौँ। हामी पार्टी महाधिवेशनको तयारीको लागि जान्छौँ। पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमार्फत अघि बढाउने उदेश्यले नै पार्टी एकता गरेका हौँ। त्यही सोचले संस्थागतरुपले हामी सामूहिक नेतृत्वका साथ पार्टीलाई अघि बढाउछौँ।
पार्टी एकता हुँदा प्रत्येक दुई/दुई महिनामा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति भएको थियो, तर १० महिना वितिसक्दा पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न के अप्ठ्यारो भयो?
अब हुने महाधिवेशनले सम्पूर्ण अधिकार कार्यकर्तामा जान्छ र कार्यकर्ताले नै पार्टी सञ्‍चालनको बिधि, तौरतरिका र ढाँचा सबै महाधिवेशनबाटै तय गर्छन र सोही अनुसार पार्टी सञ्चालित हुन्छ।
केही अप्ठ्यारो थिएन, हामीले सामूहिक नेतृत्वमै जाने भनेर पार्टी एकता गरेका हौँ। पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गरेर पनि हामीले सामूहिकरुपमा मिलेरै नेतृत्व गरिरहेका छौँ। दुई /दुई महिनामा नेतृत्व परिवर्तन गर्दा हलुकोपन हुने, जनतामा राम्रो म्यासेज (सन्देश) नजाने र पदलोलुप पनि देखिने भएकोले महाधिवेशनमा एउटै व्यक्तिलाई संयोजक राखेर सबै नेतृत्वको आधारमा पार्टी सञ्‍चालन गर्दा ठीकै होला भन्ने मान्यताले पार्टी सञ्‍चालन गरिरहेका छौँ।
अब हुने महाधिवेशनले सम्पूर्ण अधिकार कार्यकर्तामा जान्छ र कार्यकर्ताले नै पार्टी सञ्‍चालनको विधि, तौरतरिका र ढाँचा सबै महाधिवेशनबाटै तय गर्छन र सोही अनुसार पार्टी सञ्चालित हुन्छ।
पार्टीको महाधिवेशन कहिले गर्दै हुनुहुन्छ ?
महाधिवेशन पार्टी एकता भएको एक बर्षभित्रमा गरिसक्ने भनेर पार्टी एकता हुँदै सहमति भएको हो। सोही अनुसारको दस्तावेज हामीले निर्वाचन आयोगलाई दिएका छौँ। अब प्रयास हुनेछ, यही सालभित्र महाधिवेशन गर्ने।
राजपा आन्दोलनमा हुँदा फोरमले आन्दोलन छोडर स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा भाग लियो, तेस्रो चरणको चुनाव (प्रदेश २) मा फोरमसँगै प्रतिष्पर्धा गर्दा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा फोरमसँग तालमेल गर्ने के वाध्यता थियो ?
सुरु सुरुमा त हामी सडक आन्दोलनबाटै छिनोफानो गर्ने र निर्वाचनमा नजाने भन्ने निष्कर्षमा थियौँ। पछि पार्टी भित्र चिन्तन मनन हुँदा हामीबीच जनताको म्याण्डेड नलिइकन सडक संघर्ष गरेर मात्र हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निस्कियो। आन्दोलनले मात्र जनताले भने बमोजिमको संविधान परिवर्तन गराउन सकिँदैन भन्ने हामीलाई लाग्यो–किनभने विगतमा ६ महिना लामो कठोर आन्दोलन गर्दा समेत संविधान संशोधन गरिएन।
संविधान निर्माण गर्दै गलत ढंगले बनाइयो, जनताको बहुमतलाई देखाएर। संविधानसभा भित्र दुई तिहाईको बल देखाएर ठूला पार्टीले संविधान बनाए र संशोधन पनि गरेनन्। लोकतन्त्रमा सडक आन्दोलनबाट मात्र सबै माग पुरा हुँदैनन्, जनताको म्याण्डेड लिएर मात्र दबाब पुग्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ। त्यसपछि हामीले स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन बहिस्कार गरेपनि तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लियौँ।
फोरमले पहिले नै स्थानीय तहको दुई चनणको निर्वाचनमा भाग लिइसकेकोले उहाँहरूलाई अलिकति सहजता भएको र सँगठन रहेको थियो। दुई नम्बर प्रदेशमा भने उहाँहरूको र संघीय संसदमा हाम्रो केही बढी सिट आएको छ, समग्रमा समान छौँ। हामी दुबै मधेशकै एजेन्डामा केन्द्रित भएकोले प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा तालमेल गरेर अघि बढेका हौँ।
फोरमसँग तपाईंहरूको मुद्धा कत्तिको मिलेको छ, आगामी दिनमा सरकार बनाउने लगायतका बिषयमा सहकार्य सम्भव छ कि छैन?
फोरम र हाम्रो मुद्धा समान छ, केही भिन्नता छैन। चुनावमा तालमेल भइसकेपछि दुई नम्बर प्रदेशमा मिलेरै सरकार बनाउने गृहकार्य पनि चल्दैछ।
फोरमसँगको पार्टी एकता कत्तिको सम्भव छ?
सम्भावना छ। निर्वाचनअघि नै पार्टी एकता गर्ने कुरा चलेको थियो। निर्वाचनपछि एकता प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भयो। निर्वाचन सकिएको छ, अब एकताको बिषयमा छलफल हुन्छ। मधेशमा शक्तिशाली पार्टी निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मधेशी जनताको र हाम्रो भावना छ। त्यसैलेदुबै पार्टी मिलेर एउटा शक्तिशाली राष्ट्रिय पार्टी स्थापित हुन्छ। फोरम र राजपाबीच भोलीका दिनमा एकता हुँदा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन।
फोरम र राजपाबीच पार्टी एकताको सम्भावना छ भन्नु भयो तर चुनौति पनि होलान नि?
के को चुनौति? चुनौति नै छैन, हामीबीच बैचारिक दृष्टिकोण एकै भएपछि चुनौति नै छैन्।
नेतृत्वको बिषयमा कसरी सहमति होला त?
नीति एउटै, सिद्धान्त एउटै अनि नेतृत्वमा चाहिँ किन समस्या हुनुपर्यो ? हामी सामूहिक नेतृत्वमा जाने हो। ६ पार्टी जसरी हामी एक भयौँ, अब सातौं पार्टी किन एक हुन नसक्ने?
६ वटा पार्टीबीच एकता हुँदा केही समस्या भएन भने अब सातौं पार्टी थपिँदा के को समस्या केही हुन्न, आरामसँग पार्टी एकता हुन्छ।
पार्टी एकता कहिले हुन्छ? राजपाको महाधिवेशन अघि वा पछि?
जहिले दुई पार्टीबीच कुरा मिल्छ, त्यही बेला पार्टी एकता हुने हो। त्यो महाधिवेशन अघि पनि हुनसक्छ, पछि पनि। पार्टी एकतको कुरा त प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा भइरहेकै हुन्छ। जहिले तारतम्य वा कुराहरू मिल्छ, तहिले एकता घोषणा हुन्छ। अप्रत्यासित र आश्चर्यजनक ढंगले पार्टी एकता हुन्छ।
पार्टी महाधिवेशन, फोरमसँगको एकता र सरकारमा जाने बिषयमध्ये राजपाले कुन कार्य पहिले गर्छ?
पार्टी महाधिवेशन, पार्टी एकता र सरकार निर्माण तीनै कामलाई सँगसँगै अघि बढाईने छ। किन कि तीनै बिषय राजपाको प्राथमिक बिषय हुन्। पार्टी महाधिवेश घोषणाको तयारी गर्दैछौँ। पार्टी एकताको गृहकार्य पहिले पनि भएको थियो, अहिले पनि चलिरहेको छ। सरकार निर्माण गर्ने कार्य पनि महत्वपूर्ण छ, किनकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकार निर्माण गर्ने समय आईसकेको छ। आवश्यकता अनुसार जुन कुराको मेच्युआरिटी (परिपक्वता) हुन्छ, त्यही काम पहिले गरिन्छ।
फोरम एमालेसँग र राजपा कांग्रेससँग निकट रहेकै हो?
जो मधेश र मधेशीको मुद्धामा नजिक रहन्छ, हामी त्यसैसँग सहकार्य गर्छौं। जो संविधान संशोधनको पक्षमा खडा हुन्छ हामी त्यही पार्टीको निकट हुन्छौँ। त्यसैले हामी कुनै दलको नजिक वा टाढा छैनौं।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजपा र फोरमका माग संवोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको तर, संविधान संशोधन गर्ने बिषय नदिएर तपाईहरू टाढा भाग्न खोजेको भन्नु भएको छ नि?
केपी ओलीले भाषण गरेर मात्र संविधान संशोधन हुँदैन्। संविधान संशोधनका केही प्रकृयाहरू छन्। त्यो प्रक्रियामा उहाँ प्रवेश गर्नुपर्छ।पोखरा गएर भाषण गरेर मधेशको मुद्धा संवोधन हुन्छ? विगतदेखि नै एमालेले आफूलाई संविधान संशोधनकोविरुद्धमा उभ्याउँदै आएको छ।
संशोधन प्रस्ताव तयार गरौं र छलफलबाट पारित गरौं।’ त्यो अबस्थामा हामी तपाईँ (ओली) कै पक्षमा उभिएको पाउनु हुन्छ।
कांग्रेस र माओवादी त संशोधनकै पक्षमा उभिएको छ, निर्णय गरेर नै। तर,एमालेले संविधान संशोधनको पक्षमा आधिकारिक रुपमा पार्टीबाट अहिलेसम्म निर्णय पनि गराएको छैन्। पार्टीको आधिकारिक धारणा एमालेले सार्वजनिक नगरेको अबस्थामा ओलीले भाषण गरेर मात्र संविधान संशोधन हुन्छ? आधिकारिक निर्णय गर्नुपर्‍योएमालेले।
मधेशको सवाल के के हो, सारा दुनियाँलाई थाहा छ। एमालेलाई र केपी ओलीलाई थाहा छैन? संशोधनको एजेन्डा बनाएर संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरायो भने पो संविधान संशोधनको पक्षमा एमाले रहेछ भन्ने देखिन्छ। कथनी र करणीमा एकरुपता हुनुपर्‍यो। ‘भाषण नगरौं अब, संशोधन प्रस्ताव तयार गरौं र छलफलबाट पारित गरौं।’ त्यो अबस्थामा हामी तपाईँ (ओली) कै पक्षमा उभिएको पाउनु हुन्छ।
एमालेले के गर्यो भने तपाईंहरू सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्छ?
संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने कन्टेन्टसहित प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्नु पर्‍यो। कन्टेन्ट सबै ओलीजीलाई थाहा छ। विगतमा पनि एक्सरसाईज भइसकेको छ। संसदमा पनि एक पटक प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। हामीले ३६ वटा वुँदामा संशोधन खोजेको कुरा थाहा छैन? त्यो माग पत्र उहाँसँग छ। उहाँलाई पटक पटक दिइएको हो। तिमध्ये कति कन्टेन्टमा उहाँ सहमत हो स्पस्ट पार्नु पर्छ।
यसअघि एमालेले हामीलाई नसोधी संसदमा प्रस्ताव ल्याइएकोले समर्थन नगरेको भनेको होइन? त्यसैले सर्बदलीय बैठक बोलाएर छलफल गराओस।
एमालेले तपाईँलाई चुनाव जिताउन सहयोग गरेको भनिन्छ। त्यसैले अब सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित तपाईंलाई लग्ने र संविधान संशोधन पनि सँगसँगै गर्ने तयारी भएकै हो?
मलाई एमालेले जितायो रे भनेर हल्ला गर्छन्। होइन, मलाई त जनताले जिताएको हो। विगतमा जनकपुर र धनुषा तीनको जनताले एमालेलाई हराए, राप्रपा लगायतका अन्य दललाई जिताए तर, त्यहीँको जनताले यो पटक राजपा र मलाई भोट दिएर जिताएका हुन्। जनता कसैको बधुवा मजदुर हो र? गुलाम हो र कुनै पार्टीको? एमालेसँग हाम्रो कुनै गठबन्धन थियो र? हाम्रो गठनबन्धन त मधेशवादी पार्टी (फोरम)सँग थियो।
त्यसैले त निधिले कांग्रेसलाई पनि गुम्राहामा राख्नु भयो र मधेशलाई पनि ठूलो धोका भयो
जनकपुरमा सिधा चुनौति भनेको कांग्रेस र त्यहाँ उभिएको कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिजीले गरेको गतिविधि र क्रियाकलाप नै थियो। संविधान संशोधनमा कांग्रेस र खासगरी निधिजीको जुन भूमिका थियो, त्यसको जवाफ जनताले दियो।
मधेशी जनतासँग गरेको सम्झौता बमोजिम संविधान निर्माण भएन भनेर एकजना निधिजी मात्र अडिदिएर हस्ताक्षर नगरी विरोधमा उत्रिएको भए त्यस्तो गलत संविधान बन्ने थिएन। त्यसैले त निधिले कांग्रेसलाई पनि गुम्राहामा राख्नु भयो र मधेशलाई पनि ठूलो धोका भयो।
मधेशमा आन्दोलन हुँदा आफू गृहमन्त्री भएर मधेशमा गोली चलाएर त्यत्रो मधेशीको हत्या गर्‍यो। त्यो सबै कुरा त जनकपुरको जनताले सम्झिरहेको थियो। जनताले नारा लगाएका थिए कि ‘बुलेटको जवाफ ब्यालेटले दिने भनेर।’ जनकपुरमा चुनावको बेला त्यही भएर अब निधिको शासन होइन, बिधिको शासन चाहिन्छ भनेर नारा लाग्यो।
तपाई र विमलेन्द्र निधिको व्यक्तिगत विवादले कांग्रेस र मधेशी दलबीच प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति तोडियो भनिन्छ नि?
हामीसँग वार्ता गर्न गठबन्धनको संयोजक निधिजी नै हो। उहाँले कि मधेशवादी पार्टीसँग तालमेल गर्नु भएन उहाँलाई थाहा होला। कांग्रेसको जुन अहंकार थियो, त्यही कारणले त्यो गठबन्धन (तालमेल) हुन सकेन। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई हेरेर सिट बाँडफाट गर्ने भनिएको थियो, तर त्यसलाई आधार बनाईएन। उनले त जति सिट हामीले मागेका थियौं, त्यति पनि दिन तयार भएनन्।
कुन कुन क्षेत्र दिने, त्यसमा सम्झौता हुन सक्थ्यो। धनुषा तीन कसलाई दिने त्यो छलफल हुन सक्थ्यो, तर कांग्रेसले क्षेत्र होइन, सिट संख्यामै सहमति गर्न सकेन। हामीले कांग्रेससँग तालमेल नै नगरी मागे जति सिट जितेर देखाइदियौंं। कांग्रेसको अहंकार प्रदेश दुईमा साफ भयो।
कांग्रेसले संयोजक तोकेको निधिजीको अहंकारको कारणले कांग्रेससँग सम्झौता हुन सकेन र उसलाई धेरै नोक्सान भयो। हामीलाई केही नोक्सान भएन, हामीले इज्जत जोगायौं, निधि त आफू पनि हारे, पार्टीलाई पनि हराए।
कांग्रेससँग राजपाको सम्बन्ध आगामी दिनमा कस्तो हुन्छ?
कांग्रेस मधेशको इस्युप्रति त्यति धेरै इमान्दार छैन्। जहिले पनि कांग्रेसले बैमानी नै गरेको छ। गोहीले आँसु बगाए जस्तै हो, कांग्रेसको व्यवहार। कांग्रेसको भोट बैंक भनेको मधेश हो। जहिले पनि मधेशको जनताले कांग्रेसलाई भोट दिएको हो। बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि नै मधेशबाट अध्यधिक भोट कांग्रेसले पाएको हो। त्यो मधेशको जुन समस्या थियो, त्यसलाई समाधान कांग्रेसले गरेन।
कांग्रेसले मधेशको जनतालाई मतदाता र करदाताबाहेक केही सम्झिएको छैन्। मधेशलाई उपयोगको बस्तु मान्यो। कांग्रेस इमान्दार मात्र भइदिएको भए, मधेशबिरोधी यस्तो संविधान बन्थ्यो? एमाले र माओवादीलाई गालि गरेर मात्र हुन्छ? मत सबै कांग्रेसले लिने अनि काम जति अरू पार्टीले गर्ने? मधेशको समस्या यथावत रहनुमा मूल दोषी कांग्रेस हो, त्यसपछि मात्र एमाले र माओवादी हुन्।
मधेशको मुद्धाप्रति कांग्रेस, एमाले र माओवादी कुन दल बढी सकारात्मक देख्नुहुन्छ?
​लोकतन्त्रको मामिलामा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी (कांग्रेस) प्रति हामी सँधै सकारात्मक रहन्छौँ। इस्युको सवालमा जो हामी नजिक छ,उसँगै सहकार्य हुनसक्छ। अहिले पनि मधेशको सवालमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने म्याण्डेड पाएको छ, त्यसैले हामी भन्छौँ ‘एमाले इमान्दार भएर संविधान संशोधनको पक्षमा आओस।’
एमाले खोक्रो राष्ट्रवादीको एजेन्डालाई लिएर नै अघि बढ्यो भने सरकार पनि ठीकसँग चल्दैन, शान्ति र स्थिरता पनि हुँदैन। एमालेले आफूले चाहेको र मधेशवादी भागेको भनेर वाईयात गफ नगरी जिम्मेवार दलको रुपमा प्रस्तुत भए राम्रो हुन्छ।
मधेशवादी दललाई गालि गरेर र मधेशी एजेन्डाको बिरोध गरेर एमालेले निर्वाचनमा सफलता पायो भनिन्छ? यसमा सहमत हुनुहुन्छ?
यो जुन विश्लेषण छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।मधेशकोविरुद्ध जनमत पहाडमा खडा हुनु भनेको दुर्भाग्यो, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन्। जनताले एमालेलाई जिम्मेवार भएर काम गर भनेर म्याण्डेड दिएको होला। मधेशको समस्या समाधान गर्न लाग नत्र तिमी चल्न सक्दैनौ भनेर एमालेलाई जनताले म्याण्डेड दिएको हुनसक्छ।
उनीहरूले अब मधेशको समस्या एमालेले नगरेमा तिम्रो हालत फेरी पुरानै अबस्थामा पुग्छ भनेका हुन्। हामीलाई त हरूवा चरुवा के के भन्थ्यो नि। तर, मधेशको जनताले देखाइ दिए कि –मधेशवादी दल हरूवाहरू होइन, हाम्रै प्रतिनिधि हुन भनेर एमाले, माओवादी र कांग्रेसले धुलो चटाई दिए।
हाम्रो समस्या समाधान गरेन भने यो मुलुक चल्नेवाला छैन भनेर दुई र सात प्रदेशका जनताले चुनावको परिणामबाट सचेत गराई दिएका छन्। एमालेले विगतमा धेरै गैरजिम्मेवार भएर काम गर्‍यो। त्यसैले त जनताले एमालेलाई जिताएर ठूलो पार्टी बनाई जिम्मेवार बन्न भनेका छन्। भनिन्छ नि चोरलाई हवल्दार बनाई दिएपछि त्यो इमान्दार भइहाल्छ क्या।
तीन ठूला दलका नेताको व्यवहारबाट मधेश केन्द्रीत दलले कत्तिको विश्वास गर्न सक्छ कि मधेशको माग सम्वोधन गर्न उनीहरू कति जिम्मेवार छन भनेर ?
मधेश सँधै अाशामा बसेको हुन्छ। मधेशको समस्या भनेको देशको समस्या हो। यो समस्याको समाधान यहाँका जिम्मेवार पार्टी मिलेर गर्नुपर्छ । आशा र विश्वास गरेका छौँ। राजनीति त आशा र विश्वासतमा नै त टिकेको छ।
तपाईंहरूलाई फेरी पुरानै माग लिएर आन्दोलन गर्नु पर्ने स्थिति आउँछ जस्तो लाग्छ?
गजेन्द्रनारायण सिंहले भन्नुुहुन्थ्यो कि ‘जव तक शोसित इन्सान रहेगा, धर्ती पर तुफान रहेगा’ भने जस्तै शोषण र उत्पीडन रहेसम्म यहाँ लडाई झगडा भइरहन्छ। कसैले शान्ति पाउँदैन। जनताले अधिकार पाएन भने त आन्दोलन र संघर्ष भइहाल्छ नि।
तपाईँहरू पनि अब प्रदेश दुईमा सरकार बनाउँदै हुनु हुन्छ, यस्तो अबस्थामा आन्दोलन कसरी गर्ने?
हाम्रा माग पुरा गर्न हामीले यसभन्दा पहिले सडक संघर्ष गरेकै हो। अब निर्वाचनबाट आइसकेपछि हाम्रो आन्दोलन अब सडकवाट संसदसम्म पुग्ने भयो। संघीय संसद भित्र पनि हाम्रो आन्दोलन हुन्छ। अब सरकार सरकारबीच पनि आन्दोलन हुन्छ। प्रदेश दुईमा हाम्रो सरकार बनेपछि त्यो मधेश सरकारले केन्द्रीय सरकारबिरुद्ध पनि आन्दोलन गर्छ। यो आन्दोलनले नयाँ स्वरुपमा प्रवेश गर्छ र सशक्त हुन्छ।
मधेशका जनताले पनि तपाईँहरूलाई जिम्मेवार बन भनेर जिताएको हो कि?
हामीलाई जनताले संसद र सडकमादुबै ठाउँमा गएर अधिकारको लागि आन्दोलन गर्न भनेर पठाएको हो। कुर्सीमा बस्न पठाएको होइन। यो सरकारमा गएर हाम्रो समस्याको समाधान हुँदैन।
प्रदेश दुईमा मधेशवादी दलले प्रदेश सरकार बनाउँदैमा मधेशी जनता अधिकारसम्पन्न भए भनेर कसले भन्छ? भोट दिँदैमा प्रदेश दुईमा मधेशवादीले सरकार बनाउँदैमा संविधान संशोधन भइहाल्ने हो र? नियम, कानुन परिवर्तन भइहाल्ने हो र? देशको न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकामा समावेशी सिद्धान्त लागू भइहाल्ने हो र?
प्रदेश दुईमा हामीलाई जिताएर जनताले प्रान्तिय सरकारमार्फत केन्द्रीय सरकारसँग संघर्ष गर्न एउटा उचाईमा पुर्‍याएको मात्र हो
त्यो त केही पनि होइन। प्रदेश दुईमा हामीलाई जिताएर जनताले प्रान्तिय सरकारमार्फत केन्द्रीय सरकारसँग संघर्ष गर्न एउटा उचाईमा पुर्‍याएको मात्र हो। दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार बनाउनेबित्तिकै सबै समस्याको समाधान हुँदैन्।
मधेशका जनता करदाता मात्रै भए भनेर के भन्न खोज्नु भएको?
करहरू हुन्छ नि मधेशवाबाट राज्यले ८० प्रतिशत बढी कर उठाउँछ। तर, मधेशमा १५ देखि २० प्रतिशत मात्र लगानी हुन्छ। जनताले भोट दियो, सरकार बनाउँछ। अनि कर तिर्यो आर्थिक शोषण गरेको छ। बराबर अधिकार मधेशका जनतालाई दिनुपर्छ, राजनीतिक र आर्थिक अधिकार।
अब के सरकारमा जानु हुन्न ?
पहिले संविधान संशोधन हुनुपर्छ अनि मात्र सरकारको कुरा आउँछ।
पर्षा जिल्लामा सीमा मिचिएको बिषयलाई कसरी लिनु भएको छ?
कुनै पनि देशसँग सीमा बिबाद हुन सक्छ। यस्तो समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमद्वारा गर्नु पर्छ। जुन मुलुकसँग दस्तावेज र नाप नक्सा होला, त्यसको प्रमाणको आधारमा समाधान खोजिनु पर्छ। सरकारी र कुटनीतिक तवरबाट हल गर्नु पर्ने समस्यालाई अन्तर्वार्ता दिएर र जुलुस निकालेर समाधान गर्न सकिन्न। यो कार्य भनेको दुई देशबीचको सम्वन्ध विगार्ने काम मात्र हो।
दुई देशबीचको सीमा सम्बन्ध भारतसँग मात्र होइन, दुनियाँका देशमा हुन्छ नि। तर, त्यसलाई सडकको नारा बनाएर हुँदैन्। खोक्रो राष्ट्रवाद देखाउने काम मात्र हो। यसलाई देखाएर कुनै क्रान्तिकारी बन्नु हुँदैन्।
हरेक दलले चुनाव जितेर सरकारमा जाने चाहाना राख्छन तर, तपाईहरू त नजाने भन्नु हुन्छ?
सरकारमा हाम फाल्यो भने त्यही हालत नहोला भन्ने के ग्यारेण्टी छ र। त्यसैले संविधान संशोधन भएपछि मात्र सरकारमा जाने बिषयमा छलफल गर्नुपर्छ
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि कुनै पनि मधेशवादी दल सत्तामा गएनन्। पहिलो संविधानसभामा मधेशवादी दललाई मत दिए तर, हामी एजेन्डालाई वेवास्था गरेर सत्तामा गयौं, अनि जनताले देखाइदिए। सरकारमा हाम फाल्यो भने त्यही हालत नहोला भन्ने के ग्यारेण्टी छ र। त्यसैले संविधान संशोधन भएपछि मात्र सरकारमा जाने बिषयमा छलफल गर्नुपर्छ। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। यो भावनाप्रति राजपा र फोरम पनि सहमत हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ।